ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: Online မှာ ဘောလုံးပွဲ ဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲ
ချဲလ်ဆီးချစ်သော ဘလော့ဂ်ဂါ အစ်ကိုညီ အစ်မ ညီမတွေ တွေပါ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြည့်နိင်ခွင့် ရရှိအောင်လို့ စေတနာ အရင်းခံနဲ့ ပြောပြပါရစေ။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေကလည်း လျိုထားလို့ မသင့်တော်တာပါဘူး။ ဥပမာ အသုံးလိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် လေးတွေ ပြောပြ ၊ ရှယ်ယာပေးတာမျိုး ၊ ၀က်ဘ်ဆိုင်ဒ်လေးတွေ ပြောပြာတာမျိုးဆိုတာ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိင်ငံသူ နိင်ငံသားတိုင်း အကျိုးအတွက် အများကြီး အသုံးဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဘလော့ဂ်တွေမှာ သတင်းအပြင် ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ် ၊ အသုံးဝင်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတွေ တင်ပေးထားတာကို မြင်ရတော့ တကယ့်ကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ စာကဗျာတွေ ရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေဟာလည်း ကိုယ်ခံစားမှု့ အကြောင်းကို ကိုယ်ရေးတယ် ဆိုပေမယ့် ဒါတွေကလည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိင်ငံရေး ၊ ပညာရေး ၊ ဖျော်ဖြေရေး ၊ စတဲ့အချက်တွေနဲ့ အကျုံးဝင်တဲ့ မြန်မာနိင်ငံသူ နိင်ငံသား ဘလော့ဂ်ဂါ အားလုံးအား ချစ်ခင်လေးစားလျက် ရှိပါကြောင်း ဒီပို့စ်လေးနဲ့ အတူ ကျွန်တော် ပြောကြား ပါရစေ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:09 AM
အကျီသစ် - ဘောင်းဘီသစ် - အိမ်မက်သစ် - စိတ်ကူးသစ်
ချဲလ်ဆီး ၂ - ၁ မန်ယူ
ချဲလ်ဆီး - မန်ယူ
Liverpool 1-1 Chelsea in Pictures
မော်ရင်ဟို လက်ထက်မှာ မဆပ်နိင်ခဲ့တဲ့ ရှုံးကြွေးကိုြ...
လီဗာပူးလ် - ချဲလ်ဆီး
we are really miss Frank Lampard !!!!!
Happy Birthday Nandar !
အဲဗာတန် - ချဲလ်ဆီး ( ၀း၁ )
အဲဗာတန် - ချဲလ်ဆီး
Which play is better ?
ချဲလ်ဆီး - ၀ီဂန်
ချဲလ်ဆီး - ဖီနာဘာဂျီ ( ၂းဝ )
ချဲလ်ဆီး - ဖီနာဘာဂျီ
မန်စီးတီး - ချဲလ်ဆီး
ဖီနာဘာချီ - ချဲလ်ဆီး ပွဲစဉ်အကျဉ်း
ဖီနာဘာချီ - ချဲလ်ဆီး